THAZINRANANT: 11/27/11 - 12/4/11
ရဲဘော်တွေ အားလုံးတန်းစီနေကြတယ်။ ခေါင်းဆောင်က စစ်သားတစ်ယောက်ရှေ့သွားပြီး ရင်ဘတ်ကိုပုတ်လိုက်တယ်။
"လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ကြွက်သားတွေ တော်တော်တောင့်လာပြီ.. ရဲဘော်ဆက်လုပ်"
"ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်ကြီး ကျွန်မက အမျိုးသမီးစစ်သားပါ"
မွေးမြူရေးသမားတစ်ယောက်က ဝက်မျိုးစပ်ဖို့ တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ကို ပင့်လာတယ်။
ဆရာဝန် "ကြည့်ရတာ လူအကူနဲ့ မျိုးပွားပေးဖို့လိုပြီ"
ဆရာဝန်စကားကြားတော့ လယ်သမားတစ်ချက်တွေဝေသွားတယ်။ ပြီးမှ မရဲသရဲပြောလိုက်တယ်။
"ရတော့ရတယ်ဆရာ.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကိုက်မှာစိုးတယ်"
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်လေလည်တယ်။ ဒါကို လှလှပပပြင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က
အနံ့ဆိုးရလို့ တံတွေးတပျစ်ပျစ်ထွေးတယ်။ ဒါကို ဘေးမှာရပ်နေတဲ့လူကမြင်တော့ ပြောလိုက်တယ်။
(၄)တစ်နေ့မှာ "ဝ"နဲ့ "8" လမ်းမှာဆုံကြတယ်။ "8" ကိုတွေ့တော့ "ဝ"ကပြောလိုက်တယ်။
"ဟင်း.......ဝတယ်ဆိုလဲ ဝတာပေါ့. ခါးမှာ ခါးပတ်ပတ်ထားစရာမလိုပါဘူး"
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ကိုယ်ဝန်သည်တစ်ယောက်က သူ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို လှမ်းပြောတယ်။
"ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိတာ ရှင်မသိဘူးလား"
ကိုယ်ဝန်သည်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ အဲဒီလူမှာ ပျာပျာသလဲပြောရှာတယ်။
"ကျွန်.. ကျွန်တော် ကလေးအဖေ မဟုတ်ရပါဘူးနော်"
(၆)လူတစ်ယောက် ရုံးတစ်ရုံးထဲ ဒေါသတကြီးဝင်သွားပြီး မေးတယ်။
"ဟုတ်တယ်.. ခင်ဗျားကို ဘယ်သူအနိုင်ကျင့်လိုက်သလဲ ပြောပါ..."
(၇)အမျိုးသမီးတစ်ယောက် စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ထမင်းစားနေတုန်း အင်္ကျီပင့်ပြီး ကလေးကိုနို့တိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က နံရံပေါ်ကပ်ထားတဲ့ စာကိုထိုးပြပြီး ပြောတယ်။
"ဆောရီး...... ဒီဆိုင်က အပြင်စာ ယူဝင်ခွင့်မရှိဘူးခင်ဗျား"
အမူးသမားနှစ်ယောက် ရထားသံလမ်းပေါ် တယိမ်းတယိုင် လှမ်းလျှောက်နေတယ်။
ပထမအမူးသမား "တောက်....... ဒီလှေကားက တက်လို့မကုန်နိုင်ပါလား"
ဒုတိယအမူးသမား "အေးလေ... လက်ရန်းကလည်း နိမ့်လိုက်တာ"
ဒဿနိကဗေဒပါမောက္ခ "လူတုံး၊ လူအတစ်ယောက်မေးတဲ့မေးခွန်းက လူတော်လူထက် (၁ဝ)ယောက်တောင် မဖြေနိုင်ဘူး"
ကျောင်းသား.... "အော်.. ဒါကြောင့် စာမေးပွဲဖြေတိုင်း ငါမဖြေနိုင်တာကိုး"
သား... "ဖေဖေ... ဘုရားသခင်က ဘာဖြစ်လို့ ယောက်ျားကိုအရင်ဖန်ဆင်းပြီးမှ မိန်းမကို ဖန်ဆင်းရတာလဲ?"
အဖေ......"အင်း... ယောက်ျားကိုမဖန်ဆင်းခင် သူ့ဘေးမှာ တဗျစ်တောက်တောက်ရွတ်နေမယ့်မိန်းမ မရှိစေချင်လို့ နေမှာပေါ့"
စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ လင်မယားနှစ်ယောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျင်းပနေတယ်။ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ဝန်းကျင်မှာ မယားက ချိုချိုသာသာလေးနဲ့ ယောက်ျားကိုပြောပါတယ်။
"ယောက်ျားရေ... နောင်ဘဝကျရင် ငါ့ကိုနင်ယူဦးမလားဟင်း...!"
ဒါကို ယောက်ျားက အားတက်သရော ပြန်ဖြေပါတယ်။
"မိန်းမရေ.. ဒီဘဝမှာ နင်နဲ့ဆုံရတာ ငါ့အတွက် ပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ကြိမ်ပဲ ပျော်ပါရစေတော့။ တစ်ခြားလူလည်း ပျော်ရအောင်လို့ နောင်ဘဝကျရင် ဒီပျော်ရွှင်တဲ့အခွင့်အရေးကို တခြားလူဆီ ငါလွှဲခဲ့မယ်"
ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ စာစောင်တစ်ခုဖတ်နေရင်းက မိန်းမကိုလှမ်းပြောတယ်။
"မိန်းမရေ.. တောင်အာဖရိက မိန်းမတွေက ယောက်ျားနဲ့အိပ်ပြီးရင် ယောက်ျားကို ၈ဒေါ်လာပေးရတယ်လို့ စာစောင်ထဲမှာ ရေးထားတယ်။ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေး ငါလက်လွတ်လို့မဖြစ်ဘူး။ မနက်ဖြန်ပဲ ငါတောင်အာဖရိကသွားမယ်"
"တစ်လ ၁၆ ဒေါ်လာလေးနဲ့ ရှင်ဘယ်လို အသက်ဆက်မလဲဆိုတာကို သိချင်လို့ပါ..."
အရက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ခရစ္စမတ်ညမှာ ဆရာကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ လက်ဆောင်ရတော့ ဆရာက လက်ဆောင်သေတ္တာရဲ့အပြင်မှာ အရည်တစ်မျိုးပေနေတာကိုတွေ့တော့ သေတ္တာထဲမှာ ဘာလက်ဆောင် ထည့်ထားမလဲဆိုပြီး ခန့်မှန်းကြည့်လိုက်တယ်။
ဆရာက အရည်ကို လျှာနဲ့တို့ကြည့်ပြီး .... "ဒါ ဘရန်ဒီဖြစ်မယ်"
ကျောင်းသား ......... "မဟုတ်ပါဘူး"
ဆရာ................... "ဒါဆို ဂျပန်အရက်"
ဆရာ.................. "ဒီလိုဆိုရင် XO ပဲဖြစ်မယ်"
ကျောင်းသား......... "မဟုတ်ဘူးဆရာ.. အထဲမှာထည့်ထားတာက ခွေးကလေးတစ်ကောင်ပါ"
တစ်နေ့မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က ရီရီကိုမေးတယ်။
"နင် နေ့တိုင်းအလုပ်တက်တော့ နင့်သားကို ဘယ်သူထိန်းလဲ?"
"ကံကောင်းတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့ဆိုရင် ငါ့သားကို ယောက္ခမကထိန်းပေးတယ်။ ညဆိုရင် သူ့သားကို ငါကထိန်းပေးတယ်။ ညီမျှပါတယ် ဟ.."
တရုတ်ပြည်မှာ အငယ်ထားတာ ခေတ်စားသတဲ့...
ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကလူတစ်ယောက် လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်က တရုတ်ပြည်မှာ အငယ်တစ်ယောက်ထားခဲ့တယ်။ အငယ်အတွက် ၄သိန်းတန်အိမ်တစ်လုံး ဝယ်ပေးခဲ့ပြီး လစဉ်လတိုင်း ယွမ် ၃ ထောင်ပေးသုံးခဲ့တယ်။ ဒီတစ်နှစ်မှာ အငယ်နဲ့ သူလမ်းခွဲလိုက်တယ်။ ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကိုရောင်းတော့ ၁၂သိန်းရတယ်။ တွက်ကြည့်တော့ အငယ်ကို ၆နှစ်အလကားတွဲလိုက်ရပြီး ၆သိန်းမြတ်သွားတယ်။ အိမ်မြေရောင်းဝယ်ရေးကို သူကျေးဇူးတင်တယ်။ အငယ်ထားတာဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလို့ သူဆိုတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ ထိုင်ဝမ်ပြန်ရောက်လို့ ဒီအကြောင်းကို မယားကြီးကသိတော့ သူ့ကိုနားရင်းအုပ်ပြီးဆူတယ်။
"ဘာဖြစ်လို့ အငယ်တစ်ယောက်ပဲ ထားခဲ့သလဲ" တဲ့...
Posted by သဇင်ရနံ့at 23:26 No comments:
၅နှစ်အရွယ်နှင့် ၇နှစ်အရွယ် ညီအစ်ကို ကလေးနှစ်ယောက်တို့
တီဗွီကိုထိုင်ကြည့်နေကြစဉ် အငယ်ကောင်က တီဗွီခလုတ်ကို ပိတ်လိုက်သည်။
“ကြည့်လို့ကောင်းနေတုန်း ဘာလို့ တီဗွီ ခလုတ်ကို ပိတ်ရတာလဲ”
“ကျွန်တော်ဟာ သူငယ်တန်းက ဆန်နီလေးရဲ့ အဘိုးပါ။ ကျွန်တော်မြေးလေးကျောင်းတက်တာ ကိုလာကြည့်တာပါ”
“သြော်…ဟုတ်ကဲ့၊ ဆန်နီလေးဟာ သူ့ အဘိုးအငြိမ်းစားတရားသူကြီးရဲ့ ဈာပနာကိုလိုက်ပို့စရာရှိလို့ ဆိုပြီး ခွင့်ယူသွားပါတယ်ရှင် ”
“ဟေ့လူ ဟောဟိုမှာစုပြီး ကစားနေတဲ့ကလေးငယ်တွေထဲက ကျွန်တော့်ကို ခဲနဲ့
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိ ဆုတောင်းပြည့်ရေတွင်းကြီးသို့ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်
စုံတွဲနှင့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်တို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။
လောလောလတ်လတ် မုဆိုးဖိုဖြစ်သွားသည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူ့မိတ်ဆွေကို
“စုန်းတွေဟာ ဘာကြောင့် တံမြက်စည်းကိုစီးတာလဲ”
လေးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်သည် တော်ဖီမစားရ၍ စိတ်ကောက်နေသည်။ ချော့မော့မရသဖြင့်
“ရပါတယ် သားသားရယ်၊ ဦးဦးကို တစ်ခါပဲ မွှေးမွှေးပေးခဲ့”
“ဟုတ်ကဲ့ ကျတဲ့တန်ဖိုးကို မေမေလာပြီး ရှင်းပေးလိမ့်မယ်”
“မနေ့ညက စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ရင်း မျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်ကွာ”
“ဆေးကုခတွေ အမြန်ဆုံးတောင်းထားရပါလိမ့်မယ် ဆရာ”
“ဟေး ၀ိတ်တာ၊ မင်းလာချပေးတဲ့ ထမင်းကြော်ပန်းကန်ထဲမှာ တီကောင်နှစ်ကောင်
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွေးဖြစ်သွားပြီ ထင်နေမိလို့ ကယ်ပါဦးဒေါက်တာရယ်”
“ဟင့်အင်း၊ ခုတင်အောက်ပဲ ၀င်ပါရစေ”
“ဟွန့် မေမေပဲပြောတယ်လေ။ ဒီနေ့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို မနက်ဖြန် မရွှေ့ပါနဲ့ဆို..
.မြန်မာဘောလုံးချစ်သူများ စာမျက်နှာမ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။ မူရင်းကို
Posted by သဇင်ရနံ့at 23:00 No comments:
သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ အဖရခိုင်ပြည်ကို ကိုယ်လိုနီဘ၀က ကယ်တင်ကြ
Posted by သဇင်ရနံ့at 09:05 No comments:
သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ အဖရခိုင်ပြည်ကို ကိုယ်လိုနီဘ၀က ...
မြန်မာပြည်မာ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးကဒ် သုံးနိုင်ပြီ